OnePlus: ihe niile ịchọrọ ịma banyere ọdịnihu nke ụlọ ọrụ | Gam akporosis
Ọ bụghị oge mbụ na ọrụ ndị OnePlus rụrụ n'ahịa na ihe di iche iche nke uzo ahia ya. Eziokwu bụ na maka ọtụtụ, akwụkwọ ịkpọ oku ndị ahụ e rere na ọnụahịa ndị a na-adịghị ahụkebe bụ otu ụzọ isi mee ka ọchịchọ nke inwe ndị ahịa nke ha kwụsịtụ. Ndị ọzọ lere ya anya dị ka atụmatụ nke ahia nwere mgbakwunye yana mwepu, n'ihi na ọ bụ n'enweghị esemokwu. Ihe na-enweghị obi abụọ bụ na OnePlus dị iche na ndị ọzọ, nke ahụ abụghịkwa nke ga-abụ ihe ga-agbanwe na obere ma ọ bụ ogologo oge. Taa, anyị na-akọwara gị ihe bụ atụmatụ na ọdịnihu nke obere ụlọ ọrụ ahụ rụzuru ihe dị ukwuu.
El Ọdịnihu OnePlus anaghị agafe ọganihu. N'ezie, ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-eso ụzọ ya ma na-atụ anya na site ugbu a gaa n'ihu, ọ ga-enweta ụwa niile na ụlọ ahịa dịka ndị nrụpụta ndị ọzọ nwere ike ime, ọ dị m nwute ịnagide nnọkọ ahụ, n'ihi na ọ gaghị adị otú ahụ . Companylọ ọrụ ahụ ahụghị onwe ya na-achọ uto ngwa ngwa. N’ezie, ha na-ekwu na ha chọrọ ito nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ. Ha na-ara? You chọrọ ire karịa nke ị nwere ike ire? Ee, mana ọ na-eme ọtụtụ uche dịka anyị na-akọwa n'okpuru.
Na-achọ OnePlus saịtị na ọdịnihu ahịa
Maka ụlọ ọrụ ahụ, ihe dị ka ha dị ugbu a ga-agbanwe na afọ ndị na-abịanụ. N'ezie, ihe dị mkpa bụ ka doo anya banyere ọrụ ha na-arụ ma mee ka ndị ọrụ kwenye na ha bụ nhọrọ ịkụ nzọ. Ọtụtụ n'ime ndị nrụpụta taa na-ere ekwentị na ndị na-ama ụlọ ọrụ na ndị ọzọ aka, ga-apụ n'anya n'ime afọ ole na ole sochirinụ. OnePlus doro anya na ka ọ ghara ịla n'iyi, ọ dịghị mkpa ka o too na a dizzying rate na ha enweghị ike iche n'ihi usoro ha na nke ahụ nwere ike ibute afọ ojuju n'aka ndị ahịa ha. Nta bụ ihe ọzọ. Ma ọ bụrụ na nke ahụ pere mpe nke nta nke nta karịa na nyocha dị mma nke ndị ọrụ, ọganiihu ga-eru ogo ya n'afọ ise na-esote.
Na mgbakwunye, OnePlus doro anya banyere ebe ike ọha ya ga-abịa. Enwere ọtụtụ ndị ọrụ ndị ike gwụgoro maka ụlọ ọrụ ndị a na-emebu, mana ndị anaghị anwa anwa ịnwale ihe ọhụrụ. Ọtụtụ ndị ọzọ na-ahọrọ ụlọ ọrụ ndị nwere ike ọ gaghị adị na afọ ole na ole. Ha chọrọ irite uru site na otu abụọ. Dabere na ịmepụta aha ọma n'etiti ndị ahịa ya, akara ngosi nke OnePlus ga-edozi onwe ya, ha agaghị enwe ihe ọzọ ha ga-eme karịa ijere iwu ọhụrụ ahụ nke ga-eji nwayọọ nwayọọ mụbaa. Ọ bụ ihe na-abaghị uru ịre ugbu a na ọganihu na nde ma ọ bụrụ na n'oge ahịa kwadoro, ị gaghị enwe ike ịnweta onyonyo onye siri ike.
Eziokwu bụ na atụmatụ ahụ dị oke mkpa, mana nke ahụ abụghị ihe na-eju anya. Na ngwụsị nke ụbọchị ahụ, ọmụmụ nke OnePlus dịkwa oke iche na ụzọ o si eme ihe na-eche ndị ụlọ ọrụ ndị ọzọ ahịa ihu. N’agbanyeghị nke ahụ, o yiri ka ọnụ ọgụgụ ahụ ha kwenyere na ya, dị ka ikpe a na-eme onye ara na-ewe maka iwe otu n'ime ihe ndị kasị chọrọ ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » OnePlus: ihe niile ịchọrọ ịma banyere ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ahụ
Starific, a pụrụ iche mgbaghoju anya ebe psychedelia na a nnọọ akpan akpan graphic style mmeri